Somalia iyo Burundi oo ku heshiiyey 5 qodob & Xiritaanka safaaradda oo dib loo eegayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somalia iyo Burundi oo ku heshiiyey 5 qodob & Xiritaanka safaaradda oo dib loo eegayo
19th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Warsaxaafadeed: 18, October, 2014: Dowladaha Somalia iyo Burundi ayaa kala saxiixdey heshiis ka kooban shan qodob oo dhinacyada ammaanka iyo horumarka ku saabsan kaddib markii wefdi uu hoggaaminayo Ra’iisul wasaaraha Somalia ay booqasho ku tageen caasimadda dalka Burundi ee Bujumbura
Qodobada heshiiskan lagu saxiisay magaalada Bujumbura inta uu Ra’iisul wasaaraha Somalia iyo wefdi uu hoggaaminayo ku sugnaayeen, ayaa ahaa shan qodob, waxa ayna kala ahaayeen.
1-in dib u eegis lagu sameeyo xiritaanka Safaaradda Somalia ee Bujumbura, isla markaana si taxadar leh loo hubiyo ujeedada xirtaanka Safaaraddaasi.
2-in dib loo soo nooleeyo heshiis dhexmaray dowlaha Somalia iyo Burundi bishii May ee 2012-kii, kaas oo ku dhisnaa iskaashi iyo saaxiibnimada dheer ee labada dalka ka dhaxeysa ee dhanka ammaanka, maamulka, adeegga dowladda, ganacsiga iyo adkeynta xiriirka labada dal.
3-In labada dal ay si muuqata u wadaagaan wel-welka la xiriirka eedeynta loo jeediyey ciidammada AMISOM ee dhanka Kufsiga kana timid hey’adda Human Rights Watch, isla markaana guddi ka kooban wasiirrada iyo khubarada labada ay baaraan arrintaasi, si tallaabo adag looga qaado cid walba oo ku lug yeelata eedeyntaasi.
4-in la sameeyo iskaashi dhanka Warshadaha oo u dhaxeeya Somalia iyo Burundi.
5-In wasiirrada Difaaca iyo Arrimaha Dibedda ay ka shaqeeyaan fulinta heshiiskaan, isla markaana ay soo bandhigaan qorshahooda.
Heshiiskan ayaa waxaa Somalia u saxiixay wasiiru dowlaha Arrimaha Dibedda iyo Dhiiragelinta Maalgashiga, Mudane Burci Maxamed Xamsa, iyadoo dowladda Burundi uu u saxiisay wasiirka Arrimaha Dibedda.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ku ammaanay dowladda Burundi hanaanka Dimoqoraadiyadeed ee ka jira, ammaanka iyo sida ay uga go’an tahay in ay Soomaaliya kala shaqeeyaan dhisidda ciidammada Qaranka iyo sugidda ammaanka dalka.
Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa ka codsaday madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dalka Burundi iyo xunbaha wasiirrada dalkaasi in ay booqasho ku yimaadaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Koobaad ee dalka Burundi Mudane Pierre Nkurunziza, ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul wasaaraha iyo wefdigiisa booqashada ay ku yimaadeen Jamhuuriyadda Burundi, waxa uuna ballan qaaday in ay soo booqan doonaan Somalia dhowaan.
Maleeshiyo beeleed la dagaalamay ciidamada Jabuuti ee ku sugan Hiiraan